Na-atụ aro nkuzi nkuzi dị n'okpuru GNU / Linux | Site na Linux
Akwadoro nkuzi ọdịyo n'okpuru GNU / Linux
Tupu ịga n'ihu na ngwa ọrụ ntanetị dị iche iche n'efu, ekwenyere m na ọ dị mkpa itinye usoro isiokwu anyị na-achịkọta site na Hispasonic n'aka gị. Ebumnuche nke a bụ iji zere ikwughachi ọdịnaya karịrị karịa ugbu a na "netwọkụ" na ihe ọmụma ya nwere ike ịdị mkpa karịa ma ọ bụ dị obere dabere na mkpa anyị. ezere ịbụ kwa zuru ezu na ee ọzọ n'ozuzu, ebe ọ bụ na ọ dịghị onye n'ime anyị bụ ọkachamara na isiokwu. N'otu aka ahụ, ka anyị na-enwekwu akwụkwọ ntuziaka, ọ ga-abụ oge iji depụta ha ọzọ.
1 Ntọala sistemụ na Kit Njikọ Audio
3 Ihe dịgasị iche
Ntọala sistemụ na Kit Njikọ Audio
Ebumnuche mbụ nke GNU Audio na UsemosLinux bụ ịkwado usoro ihe ọmụmụ na ịchọpụta ọtụtụ mkpịsị aka nke ị ga-eji zọpụta gị usoro ndị mbụ ahụ. Ọ bara uru ịmara ihe na-eme na sistemụ "obere latency" anyị (maka nke a anyị malitere igwu egwu na Linux, nri?). Ọ bụ ezie na ụdị kernel kachasị ọhụrụ iji kernel-realtime adịkwaghị mkpa, a ka nwere ndị na-ahọrọ ya. Maka ihe a niile, ebe nrụọrụ weebụ SounDebian nke Argentine kwesịrị ịnọ na ibe edokọbara gị. E wezụga nke ahụ, ọ gụnyere akụkụ dị mma nke akwụkwọ ntuziaka.
Gbanwee Ubuntu 12.10 ka ọ bụrụ ederede ederede Multimedia
Akụkụ kachasị ike nke usoro ịmepụta egwu n'okpuru Linux na-eji JACK eme ihe. N'ebe a, ị ga - "kekọta ụmụ nwoke" ma kwụsị ịtụ egwu. O kwere omume na anyị ga-abanye n'ime nsogbu karịrị otu, mana ahụmịhe m na-agwa m na ọtụtụ ndị ọrụ na-arahụ ịhazi ya bụ na "ha agụghị ntuziaka ndị ahụ n'ụzọ ziri ezi".
Ọ bụ ezigbo iji ghọta arụmọrụ ya opekata mpe (ọ bụ ezie na ọ na - enyere aka ịhọrọ ngwaike ọdịyo a nwalere nke ọma n'okpuru Linux, ihe karịrị otu na - eji ya na - enweghị nsogbu na kaadị ejikọtara). Laa azụ na ahụmịhe nke onwe m, nkuzi Semicorchux (Pablo_F na Hispasonic) kachasị mma, ha na-adị njikere ịza ajụjụ ma nyere anyị aka nhazi ahụ na ọgbakọ ndị ahụ.
N’ikpeazụ, n’ụbọchị ya, atụgharịrị m otu edemede sitere na akwụkwọ ntuziaka AvLinux nke na-achikota ọrụ nke Jack maka nke kachasị ọhụrụ.
JACK 1/2 nhazi
JACK 2/2 nhazi
Okwu Mmalite nke Jack Audio Connection Kit
Ardor bụ "nwa agbọghọ mara mma" nke ngwanrọ ngwanrọ GPL, na ndị ọzọ kemgbe ọbịbịa nke mbipute 3. Nhọrọ ọzọ dịka ọrụ (ọ bụ ezie na ọ dị mfe ma nwee agwa "alpha") bụ Qtractor. Anyị na Ardor rụkọrọ ọrụ, anyị ga-enwe afọ ojuju ọtụtụ mkpa anyị.
Ruo ugbu a enwere akwụkwọ ntuziaka zuru oke maka mbipute 2.8 (na Bekee na Spanish, ha abụọ dị na SounDebian), nke agbakwunyere nsụgharị nke usoro Ardor3, nke dị ugbu a na Bekee. Aha pụrụ iche maka nke ọhụrụ Ntuziaka na ntanetị dị na weebụsaịtị ha.
Mana n'ezie, amaara m ndị ọrụ, ma ị chọghị iji aka gị were peeji 200 nke akwụkwọ ntuziaka, yabụ na ị ga-eweta ihe dị mfe. Ọfọn, anyị nọ na chi, n'ihi na YouTube dị. Dika anyi na-abanye na nke 3, anyị nwere ike iwebata onwe anyị na Ardor na vidiyo nke Andriu (nakwa onye ọrụ Hispasonic) na Radialistas.
Ihe dịgasị iche
Emecha (n'ihi na uzọ ọzọ ntinye a ga-abụ nnukwu ...), m ga-ekwu ụfọdụ isiokwu ndị akọwapụtara:
Irwin Cespedes (Altiplane) na-akowa otu esi eme a SideChain mkpakọ ya na Ardor3.
Mgbe ntị anaghị enyekwu, iji nyocha ihe nyocha nwere ike inye aka, na maka nke ahụ anyị nwere Nwa ehi nwa nyocha.
Adịghị m ọkachamara na synthesizers, mana ebe a ị kwadoro akwụkwọ (na Bekee) banyere Nkeji 24 y ỌchaData.
N'ikpeazụ, isiokwu m «Creatmepụta ụda Guitar mbụ anyị na Guitarix», nke ghọrọ akụkụ nke ọrụ Wiki.
Enwere otutu, mana nke ahụ bụ akụkọ ọzọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Akwadoro nkuzi ọdịyo n'okpuru GNU / Linux
Roy baty dijo
Zaghachi Roy Batty
Edezi x264 video na Avidemux.
Free Software na Peru